Nhau - European Simbi Mitengo Dzoreredza Sekunze Kutyisidzira Kunonoka
CHEMA BASA STEEL
HOT BASA BASA
KUMASHURE KUMASHURE STEEL
HSS CIRCULAR YAKAONA MABASA
TCT CHEMA CHEMA
YAKADZIDZWA FLAT BAR
Denderedzwa RAKAONA MABHARA
European Simbi Mitengo Dzoreredza Sekunze Kutyisidzira Inononoka
Vatengi vekuEurope vezvipenga zvigadzirwa zvishoma nezvishoma vakatanga kugamuchira zvishoma kukwidziridzwa kwemutengo wemugayo, pakati / mukupera kwaZvita 2019. Zvakare, iyo yekucheka kwekucheka, kunoitwa nevapamba simbi vanogadzira, muchikamu chekupedzisira che2019, chakatanga kusimbisa kuwanikwa uye kuwedzera kutakura nguva dzekutungamira. Vatatu venyika vatengesi vakatanga kusimudza mitengo yavo, nekuda kwekuwedzera kwemari mbishi. Parizvino, makotesheni ekunze ari pamubhadharo weinosvika makumi matatu eurandi patani kune zvinopihwa mudzimba, zvichisiya vatengi vemuEurope vaine mashoma masosi ekushandisa.
Musika wesimbi, mukutanga kwaNdira 2020, wainonoka, sezvo makambani akadzoka kubva kumhemberero yeKisimusi / yeGore Idzva. Chero kumuka kwezvehupfumi zviitiko zvinofungidzirwa kuve zvine mwero, munguva yepakati. Vatengi vanongwarira, vachitya kuti, kunze kwekunge chaicho chikumbiro chichivandudza zvakanyanya, mutengo unowedzera haugone. Zvakangodaro, ivo vagadziri vanoramba vachitaura mitengo kumusoro.
Musika weGerman wakaramba wakanyarara, kutanga kwaNdira. Mills anozivisa kuti iwo ane akanaka maodha mabhuku. Iko kudzikisira kwekugona kunoitwa muhafu yekupedzisira ye2019, kwakave nemhedzisiro yakanaka pamitengo yechigadzirwa chemagetsi. Hapana chiitiko chakakosha chekupinza chakaonekwa. Vanogadzira simbi dzemumba vari kukurudzira kuwedzera kumwe kunopera kwekutanga kota / kutanga kwechipiri kota.
YeFrench strip mill chigadzirwa mitengo yakatanga kusimuka kumusoro pakati / mukupera kwaZvita 2019. Chiitiko chakatorwa pamberi peKisimusi zororo. Mills 'odha mabhuku akavandudzwa. Nekuda kweizvozvo, nguva yekuendesa inotungamira yakawedzerwa. Vagadziri veEU izvozvi vari kutsvaga kushandisa kumwe kukwira kwemitengo kwe € 20/40 patani. Mamiriyoni ekutengesa muna Ndira akatanga zvishoma nezvishoma. Musika wezasi unoshanda uye vaparidzi vanotarisira kuti bhizinesi rirambe richigutsa. Zvisinei, kudiwa kubva kumatunhu akati wandei kungangoderera, zvichienzaniswa negore rapfuura. Tumira zvirevo, izvo zvakwira zvakanyanya, hazvichakwikwidzi.
Italian mitsara yemidziyo yechigadzirwa yakasvika pazasi, kune ino kutenderera, pakupera kwaNovember 2019. Ivo vakasimudza kumusoro zvishoma kutanga kwaZvita. Pakati pevhiki mbiri dzekupedzisira dzegore, kumutsidzirwa kwakati kwechikumbiro kwakacherechedzwa, nekuda kwekutanga basa. Mitengo yakaramba ichikwira. Vatengi vakaziva kuti vagadziri vesimbi vaive vakatsunga kusimudzira hwaro hwehunhu kuti vagadzirise kukwira kwavo kwekushandisa mbishi zvinhu. Zvigayo zvakabatsirwawo nekudzikiswa kwekutemerwa kwenyika kwechitatu, sezvo vazhinji vevatengesi venyika vakasimudza mazwi avo. Dhirivhari inotungamira nguva iri kuwedzera nekuda kwekutanga kugadzirwa kwekucheka, pamwe nemamiririri ekumisa / kubuda panguva yeKisimusi nguva yezororo. Vatengesi vanotsanangudza kumwe kuwedzera kwemitengo. Nzvimbo dzekushandira dzinoramba dzichirwira kuti dziwane miganho inogamuchirwa yemubhadharo. Maonero ehupfumi haana kunaka.
UK yekugadzira zvigadzirwa zvakaramba zvichidzikira, muna Zvita. Zvakangodaro, vanoverengeka vevashambadzi vesimbi vaive vakabatikana mukumhanyira Kisimusi. Order odha, kubva pazororo, zvine musoro. Mafungiro asina kunaka akapararira kubva pasarudzo huru. Strip mill chigadzirwa vatengesi vari kuwedzera mitengo. Zvibvumirano zvakati wandei zvakapedzwa, mukupera kwaZvita, pamitengo yepamwero yakatenderedza £ 30 patani yakakwira kupfuura panguva yemagariro apfuura. Kuwedzera kukwikwidza kuri kukurudzirwa asi vatengi vanobvunza kuti izvi zvinogadzirika here, kunze kwekunge kudiwa kuri nani zvakanyanya. Vatengi vanozeza kuisa makuru kumberi maodha.
Huwandu hweyakajeka mitengo yemitengo yakaitika mumusika weBelgian, panguva yepakati / mukupera kwaZvita. Zvigayo, pasirese, zvakatora mukana wekukwira kwemitengo yekuwedzera kusimudzira mitengo yesimbi. KuBelgium, vatengi vesimbi, vakapedzisira vabvuma kukosha kwekubhadhara mari yakawanda, kunyangwe iri pasi peyevanogadzira simbi. Izvi zvakaita kuti basa rekutenga rienderere mberi. Zvisinei, vatengi vanobvunza chirevo chekuti kudiwa chaiko kwachinja zvakanyanya. Kuwedzera kwekukwira kwemitengo hakuna chokwadi mumamiriro azvino emusika.
ChiSpanish chinodikanwa chekubvisa chigayo zvigadzirwa, parizvino, zvakagadzikana. Hwaro hwaro hwakadzoserwa, muna Ndira. Iko kukwira kwemutengo kumusoro kwakatanga pakati paDecember uye kwave kuchichengetedzwa, pakudzoka kubva kuzororo remuno. Kuparadzira kwaiitika, kutanga kwaZvita. Iye zvino, makambani anoda kuodha zvekare. Vagadziri vari kuda kuwedzerwa mitengo yekutakura kwaKurume uye kunyange mitengo yakawedzera munaKubvumbi. Nekudaro, zvakachipa zvinhu, kubva kumatatu emunyika, zvakavakirwa muna Gumiguru / Mbudzi, zviri kutanga kusvika. Izvi zvinogona kuita sechibodzwa kupokana nekuwedzera kukwira kwemitengo yemumba.
Post nguva: Oct-21-2020
Kukwira kwemarara kunotsigira European rebar ...
European Simbi Mitengo Kudzoreredza Sekunze T ...
Chinese simbi musika kupora kunoenderera
Runhare: 0086 21 61052109
Kero: RM 907, NO.377, JINGAO ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Kupisa Kwekushandisa Chishandiso Simbi Yakakungurudzwa Flat Bar, Tct Denderedzwa Yakaona Nereza Yesimbi, Hss M2 Denderedzwa Yakaona Makasi, Tct Denderedzwa Yakaona Nereza, Tct Denderedzwa Yakaona Makasi, Hss M35 Denderedzwa Yakaona Makasi,